အပါ့အိမ်: September 2010
ပျားရည် နဲနဲ ယူသွားပါ (၂)
Posted by Papa at 8:31 AM
Love your Enemy ရန်သူကို ချစ်ပါ
ဒီကြားထဲ အရေးထဲ အရာပေါ်တာကတော့ အမေရိကန် Homeland security ဌာနပါပဲ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးချင်နေပါတယ်။ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရင်တော့ သူ့ကို ဟိုရောက်ရင် သတ်ကြမှာပဲ။ အမှန်က သူရောက်လာတာ မသိကြပဲ၊ သူကိုယ်တိုင် သွားရောက်သတင်းပို့မှ သိကြတာကို ရှက်ရမ်းရမ်းတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူကတော့ " ဒါဟာ အခု အချိန်မှာ မဖြစ်သင့်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်နိုင်ငံကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် လူမျိုးကို ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် မိဘ ညီအကို မေင်နှမတွေက အဲဒီမှာပါ။ ကျွန်တော် သိပ် သတိရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုန်း ရှောင်ဖို့ မကြိုးစားပါဘူး။ ကျွန်တော် လုပ်နေတာကို ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတောင် မှားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သေသွားနိုင်တာပဲ။ အခု မှန်ကန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသက်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း ပေးပါမယ် " လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: ဘာသာရေး, သတင်း
Takealittle honey with you ပျားရည် နဲနဲ ယူသွားပါ
TAKE A LITTLE HONEY WITH YOU " ပျားရည်နဲနဲ ယူသွားပါ "မှ - - -
ချမ်းအေးလှတဲ့ နိုဝင်ဘာတရက်မှာ တရားသူကြီးတဦးဟာ အမှုတခုကြားနာစီရင်ဖို့ တရားရုံးကို သွားပါတယ်။ ကုန်လှောင်ရုံကြီးတခုနားအရောက် ကလေးငယ်တယောက်က "သတင်းစာတွေ၊ သတင်းစာတွေ " လို့အော်နေတာ မြင်ရပါတယ်။ သူ့ခမျာ ချမ်းနေအေးနေပေမယ့် " ဆရာ၊ သတင်းစာ ဝယ်ပါဦး ခင်ဗျာ " လို့အော်ပြောနေဆဲပါပဲ။
တရားသူကြီးက မေးတယ်။ " မင်း ဖေဖေ ဘာလုပ်လဲ သား "
" ကျွန်တော်မှာ အဖေ မရှိပါဘူး။ "
ဒါနဲ့ တရားသူကြီးက မေးပြန်တယ်။ " မင်းမေမေကော ဘာလုပ်သလဲ သား "
" မေမေက အဝတ်လျှော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေမကေင်းတာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော် လုပ်နိုင်သမျှ အကုန် လျှောက်လုပ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ သိပ်အေးလွန်းတော့ သတင်းစာ အကုန်မရောင်းရတာပါ။ "
တရားသူကြီးက မေးတယ်။ " သားမှာ ဘယ်နှစ်စောင် ကျန်သေးလဲ။ "
" ရှစ်စောင်ပါ။ "
" ဦး အကုန်လုံး ယူမယ် " လို့ တရားသူကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အိတ်ဆောင် စာအုပ်ကလေးကို ထုတ်ပြီတော့ ပိုက်ဆံတချို့ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှစ်စောင်ဖိုးထက်မကပါဘူး။
" ကဲ၊ သား အိမ်ပြန်တော့။ ခြေထောက်တွေ နွေးနွေးထွေးထွေးထား။ မနက်စာလည်း စားလိုက်။ မင်း မချမ်းဘူးလား။ " လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလေးက " ကျွန်တော် ချမ်းတာက " လို့ပြောရင်း မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျလာပါတယ်။ တရားသူကြီးကို မော့ကြည့်ရင်း " ဦးနဲ့ မတွေ့ခင်ကပါ၊ အခုတော့ ကျွန်တော် မချမ်းတော့ပါဘူး။ " လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ နည်းနည်းပါးပါး အကြင်နာကလေးဟာ နောင် ကိုယ်မတွေ့ရတော့မယ့်၊ မသိရတော့မယ့် သူတယောက်ကို အကြီးအကျယ် ဝမ်းမြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ နောင်မှာ တရားဟောဆရာကြီးတပါး ( သို့ ) သမ္မတ တယောက်ဖြစ်လာအောင် လူတယောက်ကိုတခုခု ပေးနိုင်ပါတယ်။
( From " Takealittle honey with you " by Dr. Harvey H. Springer , 1907- 1962 )
Posted by Papa at 10:44 PM
Quotations (September)အဆိုအမိန့် ၊
1. To get nowhere, follow the crowd. – Cassell.
အများနောက်လိုက်ရင်၊ ဘယ်မှ မရောက်ဘူး။
2. All unbelief is the belief ofalie. – Horatius Bonar.
အမှန်ကို မယုံသူဟာ အမှားကို ယုံနေတာပါ။
3. Without love, service is slavery.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မပါရင်၊ ကိုယ်လုပ်ပေးရတာတွေဟာ ကျွန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာမယ်။
4. To educateaman in mind not in morals is to educateamenace to society.
ကိုယ်ကျင့်တရားမသင်ဘဲ၊ စိတ်ကိုသာ အတတ်ပညာသင်တာဟာ၊ လူ့လောကအတွက် အနှောက်အယှက်တယောက်ကို ပညာသင်ပေးနေတာပါပဲ။
5. Our people do not so much need to have their heads stirred as to have their hearts touched. - Jonathan Edwards.
လူမှာ နှလုံးသားကို တို့ထိဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ဦးနှောက်ကို နိုးဆော်ဖို့က သိပ်မလိုပါဘူး။
6. The person who often looks up to God rarely looks down on any man. - William Auther Ward.
ဘုရားသခင်ကို မကြာမကြာ မော့ကြည့်တတ်သူဟာ တခြားသူတယောက်ကို အထင်သေးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ခဲပါတယ်။
7. The bigger the man, the lesser he is aware of his size.
လူကောင်ကြီးလာလေလေ၊ ကိုယ့် ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်ကို သတိမထားမိလေလေပါ။
8. A smooth sea never makesaskillful mariner.
ညင်သာတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရေတပ်သားကို ဖြစ်လာစေမှာ မဟုတ်ဘူး။
9. Honey is dearly bought if licked from thorns. – Anonymous.
ဆူးဖျားကကျတဲ့ ပျားရည်ကို လူတွေ အမြတ်နေိုး ဝယ်တတ်ကြတယ်။
10. Don't feel that you must make all mistakes yourself, learn from the mistakes of others. - Curtis Hutson.
အကုန်မှားဖူးရမယ်လို့ မမှတ်ပါနဲ့။ သူတပါးအမှားကနေ သင်ခန်းစာရယူပါ။
11. Few speed records are broken when people run from temptation. – E. C. McKenzie.
အပြစ်လုပ်ဖို့ သွေးဆောင် ဖြားယောင်းတာကို လွတ်အောင် ပြေးကြတဲ့အခါ လူနဲနဲပဲ စံချိန်ချိုးကြပါတယ်။
12. No man ever get lost onastraight road. – Abraham Lincoln.
13. Peace rules the day when Christ rules the mind.
စိတ်နှလုံးကို ခရစ်တော်ဘုရား အုပ်စိုးရင်၊ တနေ့တာကို ငြိမ်သက်ခြင်း အုပ်စိုးပါတယ်။
14. A mark of deep spiritual maturity is to be able to enjoy the journey when God puts you onadetour. – Vance Havner.
ဝိညာဉ် ရင်ကျက်မှုရဲ့ သက်သေတခုကတော့ ဘုရားက လမ်းလွှဲပြီးလျှောက်ခိုင်းရင်တောင်၊ အဲဒီခရီးစဉ်အပေါ် ပျော်နေနိုင်တာပါပဲ။
15. "The worthiest persons are generally attacked by slanderers, as we generally find it to be the best fruit which the birds have been picking." – Lord Bacon.
တန်ဖိုးအရှိဆုံးလူတွေဟာ မမှန်မကန် အတင်းပြောသူတွေရဲ့ အတိုက်အခိုက်ကို ခံကြရတတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအသီးမှ ငှက်က ထိုးတတ်၊ ဆိတ်တတ်တာ မဟုတ်လား။
16. Plan your future carefully, for that is where you are going to spend the rest of your life!
အနာဂတ်ကို သတိနဲ့ ကြိုပြင်ပါ။ ကျန်နေတဲ့ ကိုယ်ဘဝရဲ့ အချိန်တွေကို အဲဒီမှာပဲ နေသွားရတော့မှာပါ။
17. If God is your partner, make your plans large.
ဘုရားသခင်နဲ့ လက်တွဲလာပြီဆိုရင်၊ အကြံအစီတွေ ချဲ့လိုက်တော့။
18. No man who thinks in terms of catching mice will ever catch lions.
ကြွက်ဖမ်းဖို့ စဉ်းစားနေသူဟာ ခြင်္သေ့ မိလာမှာ မဟုတ်ပါ။
19. Friends are like jewels, precious and rare, but acquaintances are like leaves, scattered everywhere.
မိတ်ဆွေတွေဟာ ရတနာလိုပဲ၊ အဖိုးတန်ပြီး ရှားပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ သစ်ရွက်လိုပဲ နေရာတကာမှာ ပြန့်ကျဲနေပါတယ်။
20. One father is more thanahundred schoolmasters. – George Herbert.
အဖေဆိုတာ ကျောင်းအုပ်တရာထက် ပိုပါတယ်။
Posted by Papa at 10:32 PM
Takealittle honey with you ပျားရည် နဲနဲ ယူသွားပ...